Posted by Tranquillus | May 23, 2020 | Xafiiska
Dashboodyada 'Excel' waa mawduuc aad u weyn. Anigu waxaan ahay qof bilow ah, miyaan runti ku bilaabi karaa samaynta shaashad? Mudo intee le'eg ayay igu qaadan doontaa? Maxay yihiin tilmaamayaasha la socoshada si loo dhexgalo? Iyada oo ku saleysan tusaalooyinka fiidiyowga wax ku oolka ah. Iyo iyada oo aan loo baahnayn in la xasuusto tan oo ah qaacido. Ama xitaa bilow tababar 10 saac ah oo ku saabsan luqadda VBA. Waxaad kuheli kartaa dashboard aad u qurux badan adigoon wax hakad ah ku jirin seddex ilaa afar saacadood Dhammaan waxay kuxirantahay tayada garaafka ee aad rabto inaad miiskaaga siiso. Haddii aad qorsheyneyso inaad daabacdo u qaybi asxaabtaada. Way fiicantahay inaad diirada saarto dhinacyada qaarkood oo aad tiriso 15 saacadood. Iyo haa! sheydaanka ayaa kujira faahfaahinta.
Boorsooyinka loogu talagalay baahi gaar ah
Kahor intaadan galin qaybta farsamada. Marka hore waxaad ubaahantahay inaad hubiso in dashboardkaaga uu daboolayo baahi dhab ah. Bal qiyaas saaxiibbadaa inay kula socdaan qolka kulanka. Waxaad mashiinnadaada cusub ka sameysanaysaa shaashadda weyn. Oo runtii waxay qaadatay laba bilood. Mid ayaa leh aragtida ah in lagu dhex jiro gantaal. Ama halkii qolka dhibaatada ee warshadda gaaska. Cidina ma fahamsana. Laakiin waxaan aragnaa tusaale ahaan tirada gawaarida la dhigto goobta baabuurta la dhigto ayaa lagu soo daray. Runtii waa mid aad u muhiim ah in la go’aamiyo macluumaadka qiimaha kujira ee ay kujirto Waqti ha luminin. Ka ilaali inaad ku jahwareerto asxaabtaada qalabka raadraaca gebi ahaanba aan faa'iido lahayn.
Tusaalooyinka tilmaamaha kormeerka ee had iyo jeer la arko
Dabcan dashboard kasta waa inuu u dhigmaa xaalad gaar ah. Laakiin xariiqyo ballaaran ayaa la sawiri karaa. Waxaan guud ahaan dooneynaa inaan helno dulmar guud oo ku saabsan alaabada. Qoraalka 'dashboard-ka' wuxuu u oggolaanayaa jawaabo deg deg ah su'aalaha dhowr ah.
Bartilmaameedyada iibka miyaa, toddobaadle, bille, sannadle ah, la guuleystaa?
Waa sidee heerka saamadeena? Jajabinta shey, tixraac.
Waa maxay waqtiga kama dambaysta ah ee maaraynta khilaafaadka, waa maxey heerka xallinta dhibaatooyinka macaamiisha?
Goorma ayaan wajihi doonnaa firfircoonaanta ugu sarreysa? Immisa qof oo dheeri ah ayaa loo baahan yahay si loo xoojiyo kooxaha?
Aaway horumarkii mashruucan ama mashruucan?
Iyada oo aad ku haysato qalabka 'ዳashbood' ku habboon oo aad adigu gacanta ku hayso. Muuqaal muuqaal ah, waxaad kuhelikartaa jawaabta su'aalaha taxanaha oo dhan ee noocan ah.
Dashboodyadayda miyey leeyihiin qaab gaar ah?
Maya, haba yaraatee, xitaa haddii ficil ahaan ay dhammaantood isu egyihiin. Waxaad si cad awood u leedahay inaad sameyso waxaad rabto. Meelaha xirfadda leh. Waxaan kugula talinayaa inaad u dhawdahay meelkasta oo aad ka arki karto meelkasta oo aad joogtid. Laba, saddex garaaf, hal cabbir. Liiska u oggolaanaya adeegsadaha inuu sifeeyo tirooyinka. Iyo sababta aan asal ahaan waxyar uga fayow sidii caadiga ahayd. Laakiin wax dambe ha u dhaafin.
Haddaba tag oo ku tababbara oo noqotada gashboard-ka fadhiga ee Excel
Mid kasta oo ka mid ah tababarkiisa waxaad ka caawin doontaa abuuritaanka alwaax. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa raac tilmaamaha. Qaar ka mid ah wax-ka-beddellada yaryar ee la xidhiidha hawshaada gaarka ah Iyo voila. Ha is dhiibin dhibkii ugu horreeyay. Mar labaad dib u bilow haddii aadan helin waxtarka aad doonayso markii ugu horraysay. Waana arki doontaa, ugu dambeynti wuu shaqeyn doonaa. Laakiin markay xaalad degdeg ahi jirto waa qsawirro bilaash ah mar horeba waa diyaar.
READ 10 oo bilaash ah oo bilaash ah
Nasiib wacan guusha guusha mashruucaaga…
Xaraashka tayo sare leh ee Excel, wax barashada lagu barto oo aan lahayn halista qaladaadka. May 18th, 2020Tranquillus
horeMicrosoft PowerPoint: fahanka waxtarkeeda iyo howlaheeda.
socdaBaro Shiinees waxtar leh - Qaali wax ku ool ah oo bilaash ah